Yenza ulungelelwaniso kwi-CivilCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Yenza ukuhlelwa e CivilCAD
Mi nqaku yangaphambili Icacise into malunga ne-CivilCAD, isicelo esisebenza ngokujolise kuzo zombini i-AutoCAD kunye neBricscad. Ngoku ndifuna ukuqhubeka nokuzilolonga rhoqo ngokusekwe ngaphambili Inkcazo ye-Topography kunye neSitishi esipheleleyo, esebenzayo ukulungelelaniswa kwimizekelo yedijithali.
Kwimeko ye-CivilCAD le ibizwa ngokuba yi-axis yeprojekthi, nangona ukusukela ngeSoftDesk okanye uMhlaba besiyazi ngokulungelelaniswa kwegama lesiNgesi. Ngokusisiseko iquka ukudala i-axis esembindini, enokuba ngumgca wombhobho, i-axis yoyilo lwendlela okanye umgca wecandelo lomnqamlezo oya kwindawo.
Ukulandela inqaku lwakutshanje, apho ndibonise indlela yokwenza imodeli yedijithali ngemigqa yokujikeleza, ndiza kufutshane ngokufutshane ukuba udala njani kwaye udwebe ukulungelelaniswa neprofayili yakho.
1. Yenza i-3D polyline
Oku, nanjengoko kufuneka yenziwe kwincwadana yokubhala komhlaba, kuyacetyiswa ukuyenza kwi-2D, ebonisa amanqaku edlula kuwo kuba isiza kunye nepoligoni yokuphambuka. Emva kokuwela, chukumisa i-vertices kwaye utshintshe ngesandla ukuphakama kwitafile yeepropathi. (Lalela ngo + faka)
Emva koko, imigqa ifakwe, kunye nomyalelo ukuhamba, ukhetho Ujoyine.
Ukuba unxibelelaniso x, y, x ke kulula. Amanqaku ayenziwe, kunye nomyalelo indawo, Emva koko ubhala uququzelelo x, y, z okanye ukudibanisa kwi-Excel. Emva koko i-polyline ityhilwe kunye i-snap kusebenze kwinqanaba leendawo (indawo).
2. Chaza izikhululo zezityalo
Oku kwenziwa kwimenyu I-CivilCAD> I-Altimetry> I-Axis yeProjekthi> Izikhululo zeMarko
Sibuyela ngokulandelelana kumgca womyalelo omele ulandele:
Phrinta isikali 1 ukuya <1000>:
Oku kuhambelana nobukhulu apho silindele ukuprinta izicwangciso okanye ukuvelisa iindawo. Sibhala phantsi umdla wethu, kule meko i-1000, emva koko ukungena.
Khetha i-project axis:
Apha kusicela ukuba sikhethe i-polyline. Kuya kufuneka uyichukumise kufutshane nesiphelo apho ufuna amaxesha onyaka aqale khona.
Isikhululo sokuqala segama lesikhululo0 + 000>:
Oko kukuthi, ukuba sifuna enye imodareyshini kwitshati yesitishi ngasinye, ukuba asiyikuguqula, senza kuphela ukungena.
Apha, iyasibuza ukuba ngowuphi umgama esifuna ukuba inkqubo siwuqwalasele, ekudalweni kwamacandelo eminqamlezo. Ngokubanzi, kuyafana kwicala ngalinye, kodwa akunjalo, ngokungathi sisebenza kuhola wendlela o-2, imizila emi-2 endleleni; Kucacile ukuba sizakufuna umgama omkhulu kwicala elinye ukugqitha omnye umzila kunye nokubandakanya ithambeka.
Ikhefu/ Umgama / Isitishi / indawo / indawo yokuphela :
Nanku uyasicela ngendlela esilindele ukuba izitishi zibekwe uphawu kunye ne-axis; Kwimeko yethu, ukuba sifuna kumitha nganye ye-20, sikhetha ileta I.
Ukwahlula phakathi kwezikhululo20.000>:
Kuba sikhethe ukhetho lwexesha, ngoku sibeka umgama. Emva koko sikhetha izitishi zokuqala nezokugqibela.
Isitishi sokuqala0 + 000>:
Isikhululo sokuphelaX + XXX>:
Ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili, loo polyline ithathwa njengolungelelwaniso, kwimeko ye-CivilCAD, i-Axis, enedatha ehambelana nayo. I-CivilCAD ehlwempuzekileyo kule ndawo, kodwa ilula kuba inkqubo ichazwe ngendlela emgceni; Kunjalo I-CivilCAD yenza ngaphezulu, kodwa ukudideka phakathi kweeNkqubo kunye nePavey panels kufuna umonde; ngoko inani lamathebhu apho iphaneli yethemplate inayo kwaye ekugqibeleni ubunzima bokudlulisela iethemplate kwezinye iimisebenzi.
3. Yenza iprofayili
Ngoku into esinomdla kuyo kuluhlu lweprofayili yokuphakama kwendawo esekelwe kwi-polyline.
Oku kwenziwa ngemenyu, CivilCAD> Altimetry> Iiprofayili> Isimo somhlaba> Zoba
Emva koko silandela ukulandelelana komgca womyalelo:
Axis/ Amanqaku / Incwadi yesandla / Ifayile / i-3d polylineE>:
Kule meko, siya kusebenzisa ukhetho lwe-Axis (Ileta E), nangona ingaba yi-3D polyline ukuba sasingayiguqulelanga ibe ngumlungelelwaniso, amanqaku okanye umgca odwetswe ngesandla ngqo.
Isikali esime nkqo 1 ukuya ku1000.000>:
Isilinganisi esime nkqo 1 a1000.000>:
Kukulungele ukutshintsha isilinganisi esime nkqo, ukuba sifuna utshintsho lokuphakama lubonakale. Umzekelo, ukuba ukhethe isikali esime nkqo se-1,000 200, ungasebenzisa isikali esime nkqo esingu-1.
Ibuza ukuba siza kufaka phi iprofayili, sikhetha inkcazelo ekunene kumzobo, ngoko ukungena.
4. Yenza igridi kwiprofayili
Sikhetha kwimenyu CivilCAD> Altimetry> Iiprofayili> Igridi kwaye emva koko silandela ukulandelana komgca womyalelo:
Khetha iphrofayili yendawo:
Sibonisa kwiphaneli ebonisiweyo, ukuba sifuna kuphela umhlaba wendalo, okanye ulungelelwaniso. Sikwachaza ukuba iilebhile ziya kuba zizenzekelayo okanye siya kuzichaza ngokuzenzekelayo.
Igama ligqityiwe kwaye idatha yezikhululo ichazwa njengomgama wendawo, apho iqala khona, inani lezityalo kunye nokuba sifuna ibhokisi ngeenxa zonke.
Ngale nto, umsebenzi wethu kufuneka ulungele. Ngokuqinisekileyo ilula ngokuthelekiswa ne-Civil 3D, nangona inesithintelo kwinkcazo yeetemplate ezingene kwifom ye-xml. Kukho nobunzima bokuhlaziywa ngokuzenzekelayo phakathi kwesityalo kunye neprofayili.